08 martsa : Isaky ny faritra ny fankalazana
jeudi, 18 février 2021 11:03
Noho ny hamehana ara-pahasalamana dia hiavaka tsy toy ny isan-taona ny fankalazana ny 08 Martsa amin’ity taona ity, araka ny fampitam-baovao nataon’ny serasera eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika.
Tapaka teo anivon’ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 17 febroary 2021, hoy ny fampitam-baovao, fa isaky ny faritra no hatao ny fankalazana ny fetin’ny 08 martsa amin’ity taona ity mba hisorohana ny mety hiparitahan’ny valanaretina Covid-19 izay mbola mihaodihaody eto amintsika.
Tsy misy ny fihaonam-be iarahana fa samy mankalaza izany ny isaky ny Faritra 22.
Fambolen-kazo, fanentanana amin’ny fizakantenan’ny vehivavy sy ny fikajiana ny tontolo iainana no hiompanan’ny fankalazana.
Mandritra ny herinandro, izany hoe 01 Martsa ka hatramin’ny 06 Martsa dia handeha hitsidika ny faritra, hanome fanampiana ary hankahery ny vehivavy sy ireo fikambanam-behivavy isaky ny renivohim-paritany ny vadin’ny Filoham-pirenena.
Any DIANA kosa, any Antsiranana izy ny 07 sy ny 08 Martsa 2021 hanao ny nofon-kena mitampihavanana sy ny fambolen-kazo manokana, izay iarahana amin’ireo vehivavy sy fikambanam-behivavy ao amin’ireo Distrika mandrafitra ny faritra DIANA.
Tsy hisy ireo solon-tena avy any amin’ny faritra hamonjy any an-toerana fa ny vehivavy ao anatin’ny faritr’i DIANA sy ireo Minisitra vehivavy ary ireo vadina Minisitra vehivavy ary olona vitsivitsy no hifanotrona ny vadin’ny Filoham-pirenena amin’izany.